Karaiba: Jeritodika isam-paritra 2009 · Global Voices teny Malagasy
Karaiba: Jeritodika isam-paritra 2009	Voadika ny 16 Janoary 2010 9:16 GMT
Zarao: Amin'izao fankalazan'ny Global Voices ny faha-dimy taonany izao, dia izao no fotoana hanararaotina hanazavàna ny antony anaovantsika izay ataontsika sy izay fiovana vitan'ny asantsika. Araka ny namintinan'ny mpiara-miasa amiko Jillian York azy hoe, “Mampiely tantara isika. Mampiely teny.” Miezaka ny ho amin'izany tokoa izahay noho ireo olona marobe miketrika amin'ny fanaovana ity tetik'asa hanana ny mahaizy azy ary mihoatra noho izany aza. Ny sasany amin'ireo olona mahafinatrtra ireo dia ao amin'ny ekipa Karaiba, ary ao anatin'ny fisaintsainana no hanaovanay jeritodika amin'ireo lahatsoratra tena nahaliana/manan-danja/nampisokatra ny maso taty an-toerana tamin'ny taona 2009…
Azo heverina ho taonan'ny fihetsiketsehana ara-sosialy izy iny. Miainga amin'ny fanehoana firaisan-kina niaraka tamin'ny vahoakan'i Gaza izay nijaly tamin'ireo fidarohana baomba ka hatrany amin'ny fanandratam-peo hijerena azy ireo manokana “manohitra ireo karazana fihoara-pahefana rehetra”, Nametraka marika tamin'ireo tontolon'ny blaogy any amin'ny faritra i Guadeloupe sy ireo faritra frantsay any ampitan-dranomasina. Nanandra-peo ihany koa ireo mpitoraka blaogy Haisiana teo amin'ny fifanandrinana ara-politika, raha niaina hetsika fanoherana tany amin'izy ireo manokana kosa Porto Rico sy Bermuda .
Tsy maintsy ho nisy fiatraikan'ny tany Karaiba ny krizy ara-bola maneran-tany. Ireo mpitoraka blaogy avy any Trinite sy Tobago, Guyanne, sy ny hafa tany an-toerana dia nangotrakotraka taorian'ny famborahana ny fitantanam-bola ratsy dia ratsy. Nanan-ko lazaina betsaka tokoa ireo mpitoraka blaogy momba ireovokatra ara-toekarena nateraky ny Fivoriam-be faha-dimy an'ny Amerika, notontosaina tamin'ny fiandohan'ity taona ity tany Trinite sy Tobago.
Fahasalamana Ny tantara ara-pahasalamàna lehibe indrindra tamin'ty taona ity dia tsy isalasalana fa ny fahatongavan'ny tsimok'aretina H1N1.
Be ny raharaha nandalo tany amin'ny fitsarana tany amin'ny faritra maro tany Karaiba tamin'iny taona iny: Guadeloupe, Barbades, ary indrindra nandritra ny tantara nampangitakitaka iray, Guyanne. Toa nisondrotra be ihany koa ny tahan'ny Herisetra mahery vaika tany amina nosy maro – ao anatin'izany ny fanararaotana ao an-tokatrano sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy – ary mpitoraka blaogy Indiana Tandrefana maro no nampiasa zava-nitranga teo an'ilay mpanakanto Barbadiana malaza Rihanna sy ny sipany tamin'izany fotoana, Chris Brown, mba hampitàna hafatra momba io olana io.
Ny fahalalahana manao gazety (na ny tsy fahampian'izany) dia mbola foto-dresaka nalaza indray ho an'ny tafatafam-paritra tamin'ity taona ity, toy ny sivana sy ny fahalahana maneho hevitra. Ny tantara mety mampiseho tsara ny loza misy eo amin'ny fanehoana ny hevitry ny tena any amin'ny faritra sasany dia ny fisamborana an'ilay mpitoraka blaogy Kiobana Yoani Sanchez (niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy roa) noho ny nandehanan'izy ireo tany amin'ny diabe manohitra herisetra tany La Havanne.
Ho fankalazàna ny Blog Action Day 2009, nanampy ny feon'izy ireo tamin'ny dinidinika maneran-tany momba ny fiovaovan'ny toetr'andro ireo mpitoraka blaogy Antillais, raha tany Guadeloupe kosa, nanahirana ny tsirairay ny momba ny fahazoan-drano.
Nitondra hafaliana sy fankalazana tamin'ireo mpakafy fanatanjahan-tena any an-toerana ny Fifaninanana iraisam-pirenena IAAF, noho ny fahaizan'ny Usain Bolt an'ny Jamaika nampiavaka azy sy “atleta” Antillais hafa.
Mazava ho azy fa nisy ireo tantara mahavariana hafa izay notaterina: ny fandraràna ny hira vetaveta any Jamaika, ny fialàn'ilay “Prix Nobel” Derek Walcott tsy hirotsaka ho an'ilay toerana Profesoran'ny Tononkalo any Oxford izay hifandrombahana, Ny fanaovam-beloma farany an'Itompokolahy Fr. Jean-Juste tany Haiti . Nanaraka ny làlan'ny Caraibe izahay, nanamboatra tambajotra ho an'ny zava-kanto tamin'ny aterineto, ary nandray anjara tamin'ny Fampisehoana ho an'ny Fandriampahalemana tany Cuba. Ary tsy andrinay izay hahitàna izay ho entin'ny taona 2010. Arahabaina natratra ny taona!
Tantaran'ny Karaiba farany 3 andro izayJamaikaNahazo Aina Vaovao Indray Ilay Afisim-pizahantany Mametraka An'i Jamaika Ao Anaty Sarintany
Amerika AvaratraAmerika LatinaKaraibaBarbadosBermudaEtazoniaGoadelopaGoianaHaitiJamaikaKiobàMartinikaPôrtô Rikô (Etazonia)St. Vincent & the GrenadinesSurinameTrinite sy Tobago
Fahalalahàna mitenyFahasalamànaFanoheranaFifandraisana iraisam-pirenenaFifidiananaFifindrà-moninaFitantanam-pitondranaHafanàm-po an-tseraseraHaisoratraHevitraLalànaMedia sy Fanoratan-gazetyMozikaPolitikaTeknolojiaToekarena sy FandraharahànaTontolo_iainanaVehivavy sy MiralentaZavakanto & KolontsainaZon'olombelona